ဆံပင်ဆိုးရင် ဘာဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်လဲ? -
” ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်းနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သင်မသိသေးတဲ့ အချက်များ “
ဟိုးအရင်ခေတ်တွေတုန်းကတော့ အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေလောက်ပဲ ဆံပင်ဆေးဆိုးခဲ့တာ ဒီနေ့ခေတ်ဆိုရင် လူကြီးကလည်း လူကြီး အလျှောက် အမည်းဆိုးရတယ်၊ လူငယ်တွေကလည်း အလှအပ အတွက် ဆံပင် Bleach လုပ်တယ်၊ Hightlight ဖောက်တယ်၊ အရောင်မျိုးစုံကို ၆ လ တစ်ခါလောက်ပြောင်းလာကြပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီလိုမျိုးဆံပင်တွေကို ဆေးဆိုးရင် ဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ?
ဆံပင်ဆိုးတာ ဘယ်လောက်ပဲ Chemical နည်းပါတယ်ပြောပြော Ammonia တွေ၊ Ammonia free ဆိုလည်း အခြားဓါတ်ပေါင်းတွေ၊ Peroxide တွေ စသည့်ဖြင့်အများကြီးပါပါတယ်။ သူတို့က ဆံပင်တွေရဲ့ အပြင်လွှာတွေကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီး ကြာလာတဲ့အခါဆံပင်တွေကိုပြတ်ထွက်စေပါတယ်။
အချို့လူတွေမှာ အရေပြားနဲ့ဓါတ်မတည့်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ နှင်းခူနဲ့ အခြားအရေပြားရောဂါရှိတဲ့လူတွေဆို ဆေးဆိုးခြင်းကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အချို့ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိတဲ့လူတွေမှာလည်းဓါတ်မတည့်တာတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးဆေးတွေမျက်လုံးထဲဝင်ရင်လည်း မျက်သားတွေယောင်ပြီး ရဲလာတတ်ပါတယ်။
ဆိုးဆေးတွေက ဓါတုပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် မွေးညင်းပေါက်လေးတွေ ဦးရေပြားတွေထိရင် ဆံပင်ကို သက်တမ်းတိုပြီး ကျွတ်ထွက်စေပါတယ်။
ဆံပင်ဆိုးခြင်းဟာ လေ့လာမှုတွေ အရ ဆီးအိတ်ကင်ဆာ၊ သွေးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ တို့နဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတိအကျကောက်ချက်ချဖို့ကတော့ လေ့လာမှုတွေ ထပ်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။
ဆံပင်ဆေးဆိုးတာကြောင်း အမျိုးသမီးတွေမှာ ကလေးမရနိုင်ဘူးဆိုတာ အခုထိ လေ့လာထားသလောက်တော့ သေချာမတွေ့ရှိသေးပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့လို့ ဆံပင်ဆေးဆိုးတာ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ ဆိုပေမယ့် အထက်ပါပြသနာတွေရှိတတ်တာတော့ သတိထားရပါမယ်။ ဆိုးဖို့လိုလာရင်လည်း ဓါတုပစ္စည်း အနည်းဆုံးဆေးမျိုး၊ Henna စတဲ့ ဒါန်းမှုန့်ဆိုးထားမျိုးက အနည်းငယ်တော့ပိုစိတ်ချရပါတယ်။ ခဏခဏဆိုးတာထက် ၆ လအစား ၁ နှစ်လောက်နေမှ အရောင်ပြောင်းတာတို့ စသည့်ဖြင့် အချိန်ကြာကြာ ခြားသင့်ပါတယ်။
Ref: American Cancer Society, NHS.UK, Healthline
highlight #ဆံပင်ဆေးဆိုး #haircolor
girlhairstyles #hope #hopetele
Dec 9, 2021 Health Tips, Healthy & Beauty